PVC Kunze Kwemadziro Yakarembera Bhodhi Vagadziri - China PVC Kunze Kwemadziro Yakarembera Bhodhi Vatengesi & Fekitori
PVC Kunze Wall Kutsigira Ha ...
PVC Kunze Wall Kutsigira Ex ...
PVC Kunze Kwemadziro Kutsigira Ea ...
PVC Kunze Kwemadziro Kutsigira Mu ...
PVC Kunze Kwemadziro Siding Kutanga Bar Chinongedzo chekugadzirisa yekutanga yakarembera bhodhi pazasi. Mumamiriro ezvinhu akajairika, pasi payo inoenderana nereferensi mutsetse, kazhinji uri panosangana mataira eceramic, matombo etsika, matombo ehwahwa, nezvimwewo uye mabhodhi akarembera.
PVC Kunze Kwemadziro Ekutsvedza Masuo / Hwindo revhavha kutsiva simende, plaster mutsetse, uye machena mawindo chivharo, inoshandiswa sehwindo rinovhara padhuze nekurembera bhodhi. Kana iyovharo rehwindo rave rakashongedzwa nezvimwe zvinhu, ndokumbira usateerere ichi chinongedzo uye shandisa J -yakaita tambo kuvhara kumucheto.
PVC Kunze Kwemadziro Siding Eaves Plate inowanzo shandiswa kupfekedza kumberi kwecornice yeimba, inoda kuve yakagadzirirwa tambo yekuvhara.
PVC Kunze Kwemadziro Siding Kubatanidza bar inoshandiswa kubatanidza zvidimbu zviviri zvemabhodhi akarembera yakatenderera uye kuvhara mativi.
Kugwinya kwakanaka, kupikisa kwembambo uye kwekunze kusagadzikana kusagadzikana. Inogona kutemwa zvisina tsarukano zvichienderana neinjiniya dhizaini uye dhizaini yekuita, kukotama uye kuchinja chimiro, hakuzove kupwanya, kusiri nyore kukwenya, uye kusagadzikana Acid-base ngura uye mvura mhute ngura, yakaderera thermal conductivity, yekuzvidzima murazvo unodzora ku B1 level chiyero, inogona kunyatso kunonoka kupararira kwemoto.